Apple wuxuu sii daayay Cusboonaysiinta Jiilka 7aad iPod nano | Wararka IPhone
Adiga oo aan sameyn buuq badan, Apple ayaa sii daayay casriyeynta jiilka toddobaad ee iPod nano shalay. Qalabka cusub, kaas oo ah nooca 1.0.4, ayaa la sii daayay iyada oo aan la cayimin mid ka mid ah isbeddelada ku jira cusboonaysiinta. Haddii aan helno warar muhiim ah, ka waaban mayno inaan soo sheegno.
Cusboonaysiintaan loogu talagalay jiilka XNUMXaad iPod nano kaliya la soo bixi karaa oo lagu rakibi karaa iTunes, oo ka duwan noocyada kale ee iOS ee sidoo kale lagu soo dejisan karo OTA (Hawada Hawada). Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee nano iPod ka hor intaan tan la sii deynin sanadkii 2011, markaas oo wali la heli karo nuuca u eg saacadda
Naqshadaynta 'iPod nano' UI waxay ku dhisan tahay macruufka, laakiin nidaamkeeda hawlgalku waa mid lahaansho mana u isticmaali karo aalad kale. Wax aad loo dhaleeceeyay, Nidaamka hawlgalka nano ee iPod wuxuu si gaar ah ugu saleysan yahay macruufka 6, nidaam laga soo bilaabo seddex sano ka hor isla markaana sii wadaya jahwareerka inbadan oo naga mid ah horeyba u aragtay inuu duugoobay, in kasta oo ay waliba run tahay in qaar badani wali ka doorbidayaan sawirka fidsan iyo kan cad ee aan hayno tan iyo iOS 7, oo ah nidaam yimid 2013.
On July 15, Apple waxay cusbooneysiisay iPod nano, iyo inta kale ee iPod-yada, hal in lagu daro midabyo cusub (marka loo eego nano) sida dahab, buluug mugdi ah iyo casaan, midabyo lagu daro lacag iyo madow. Qiimahiisu waa 179 2,5 wuxuuna leeyahay shaashad 16-inch ah iyo XNUMXGB oo keyd ah. Waxay noqon kartaa qiimo sare in aan la helin kaamerad ama la awoodo in laga soo dejisto codsiyada App Store, laakiin waxaan horey u ognahay inaysan jirin wax soo saar jaban oo uu tufaax ku qaniinay astaantiisa.
Waxaad macluumaad dheeraad ah ku leedahay Websaydh rasmi ah oo loogu talagalay Jiilka XNUMXaad ee nano iPod leh Multi-Touch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iPod » Apple wuxuu sii daayay Cusboonaysiinta Jiilka 7aad iPod nano
Sababtoo ah muusigga aan ka soo dejisto iTunes-ka Apple Music laguma dhejin karo iPod-ka.
Ku jawaab Migue
Jose Antonio Campos sawirka muuqaalka dijo
Way igu fiican tahay qalabka iPod
Jawaab Jose Antonio Campos
Ma jiraa qof isku dayay oo wax horumar ah ma helay ???
Waxaan isku dayay 24kan saacadood. oo ma jiro wax isbeddel ah, oo eeg inaan raadsaday.
Aniguba waan cusbooneysiiyey sidoo kale, sidee u socotaa ,,, habka aan ugula dardaarmo qof walboo kordhiye ah, waxaa loo yaqaan fiio fujiyama, pass mug leh waxbana kama qaadato
Ku jawaab madaxa
Hagaag, tan iyo markii aan cusbooneysiiyay, iPod-ku wuxuu bilaabay inuu fashilmo oo kaligiis wuu damiyaa, waxay umuuqataa inuusan lacag ka qaadaynin batteriga markuu isku xirmayo. Runta ma aqaano, waa wax aad loola yaabo.
Sidee buu kuu shaqeeyaa? Waan cusbooneysiiyay oo xilligan sifiican ayey u socotaa. By the way, anigu ma arko wax cusub